Ra’iisul wasaare ku-xigeenka oo Madaxda galmudug la kulmay “SAWIRRO” | Baydhabo Online
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka oo Madaxda galmudug la kulmay “SAWIRRO”
Wafdigan uu hogaaminayay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte oo ay ku wehliyaan Wasiir ku-xigeenka Amniga Cabdinaasir Maxamed Cali iyo saraakiil ciidan ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado waxaa halkasi ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Casir Gacal iyo mas’uuliyiin kale.
Wafdiga ayaa loo galbiyay xarunta Madaxtooyada Dowlad goboleedka Galmudug, halkaasi oo ay kula kulmeen mas’uuliyiinta maamulkasi iyo sarakiil ciidan, waxaana kulanka diirada lagu saaray qabyo qoraalka Siyaasadda Amniga Qaranka iyo arrimo kale oo dhanka ammaanka quseeya.
Kulanka markii uu soo idlaaday ayaa waxaa saxaafadda ugu horeyn la hadlay Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Casir Gacal oo sheegay in wafdiga Ra’iisul wasaare ku-xigeenka ay isku afgarteen arrimo badan oo dhanka Nabadgelyada ah, kuwaasi oo ay ka midyihiin ilaalinta xeebaha, xoojinta amniga.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in socdaalka ay ku tegeen Cadaado uu qeyb ka ah wadatashiyada lala yeelanayo dowlad goboleedyada ee ku aadan siyaasadda amniga Qarnka.
“Waxaan ka wada hadalnay arrimaha qabyo qoraalka Siyaasadda Amniga Qaranka, ilaalinta xeebaha dalka, waxaana ay aragtiyo ka dhiibteen siyaasadda Amniga Qaranka, iyadoo ay jirtay horey shirar ay wada qaateen madaxda Wasiirada Arrimaha gudaha heer Federaal iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug, kuwaasi oo arrimaha amniga la isla meel dhigay” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka.
Wafdiga Ra’iisul wasaare ku-xigeenka oo socdaal labo maalin qaatay ku soo maray magaalooyinka Baydhabo iyo Cadaado ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.